Miray izao tontolo izao hiady amin'ny fiara tariby eo amin'ny Tendrombohitra Kilimanjaro
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Miray izao tontolo izao hiady amin'ny fiara tariby eo amin'ny Tendrombohitra Kilimanjaro
Jona 11, 2019
Mpanoratra Adam Ihucha - eTN Tanzania
Vahoaka marobe erak'izao tontolo izao no niara-nanohitra ny mety ho fananganana fiara tariby mampiady hevitra eo amin'ny Tendrombohitra Kilimanjaro, toerana iray lova manerantany.
Tamin'ny volana martsa 2019 ny minisitra lefitra misahana ny harena voajanahary sy fizahantany ao Tanzania, Constantine Kanyasu dia nanambara ny fikasana hametraka tariby tariby amin'ny tendrombohitra avo indrindra any Afrika, ho paikady hisarihana mpitsidika bebe kokoa sy hampisondrotra ny isan'ny fizahan-tany.
Ny tariby tariby dia mikendry indrindra ny fanamorana ny fitsidihan'ny mpizahatany zokiolona, ​​izay mety tsy dia ampy ara-batana hiakarana ny tendrombohitra, izay eo an-tampony, 5,895 metatra ny halavany.
Raha tokony ho ny fahitana mahazatra ny lanezy sy ny ranomandry, ity fiara tariby ity dia hanolotra safari fitsangatsanganana iray andro miaraka amin'ny fijerin'ny vorona iray, mifanohitra amin'ny dia an-tongotra valo andro.
Fa haingana dia haingana ny fanehoan-kevitra, miaraka amin'ny fanangonan-tsonia an-tserasera fanoherana ilay tetikasa eo amin'ny tranokala lova manerantany, nahasarika mpanao fihetsiketsehana efa ho 400,000 eran'izao tontolo izao izay mangataka amin'i Tanzania hitazona ny Mount Kilimanjaro 'tsy misy tariby tsy misy fiara'.
Ny fanangonan-tsonia an-tserasera dia nanondro ny fiantraikan'ny toekarena eo amin'ny 250,000 eo ho eo amin'ireo mpanafika eo an-toerana izay miankina amin'ny hetsika fizahan-tany ao amin'ny Mount Kilimanjaro fotsiny, ho an'ny fivelomany.
Kilimanjaro dia iray amin'ireo mpizahatany lehibe any Tanzania, manintona mpihanika 50,000 55 ary mahazo $ XNUMX tapitrisa isan-taona ny firenena.
"Ny fampidirana ny tariby tariby eo amin'ny Mountain, izay tsy mila ny fanampian'ny mpitatitra intsony, dia hanimba ity loharanom-bola ity" hoy i Mark Gale, izay nandefa ny fanangonan-tsonia tao amin'ny Change.org.
Notsipihan'i Gale ihany koa fa ny olona tranainy indrindra tamin'ny fiakarana an-tongotra Kilimanjaro dia 86 taona ary nilaza fa ny tendrombohitra dia zakan'ny mpitsidika "antitra".
"Niakatra tamin'ny volana lasa aho tamin'ny faha-53 taonako ary traikefa nahafinaritra ny nametraka ny tongony teo alohan'ilay iray tongotra ary nipetraka teo an-tendrombohitra, tsy misy fientanam-po amin'ny fitondrana taxi ho any an-tampon'ny tendrombohitra" hoy Atoa Gale.
Ny CEO CEO Tanzania Association of Tour Operations (TATO), Sirili Akko, dia nilaza fa heveriny fa ilaina ny manao fanadihadiana izay hitarika ny governemanta amin'ny vidim-piainana mety hilazana ny tsenan'ny tsena manokana kendreny ho an'ny tariby tariby - ny loholona sy ny kilemaina - manohitra fahasimbana eo amin'ny tontolo iainana tsy azo sitranina ary fanaovana dokambarotra ratsy.
Ny serivisy fitaterana tariby tariby dia "horosoina amin'ny làlambe Machame izay hanombohana sy hiafaran'ny fiakarana", hoy i Beatrice Mchome avy amin'ny Crescent Environmental Management Consult, ary izay mitarika ekipa manam-pahaizana amin'ny fanombanana ny tombana amin'ny tontolo iainana sy ny fiatraikany ara-tsosialy.
Ny làlana Machame, fantatra amin'ny anarana hoe Route Whiskey, no malaza indrindra amin'ny hatsaran-tarehiny. Na izany aza, ny lalana dia heverina ho sarotra, mideza ary sarotra, indrindra noho ny lalan-kalehany fohy kokoa (dimy ka hatramin'ny enina andro ho an'ireo izay mitady hahatratra ny tampon'isa).
Ity làlana ity dia mety kokoa amin'ireo mpihanika mpitsangatsangana bebe kokoa na ireo izay manana traikefa avo, fitsangantsanganana na backpacking.
Nilaza tamin'ny mpandraharaha mpizahatany tao Arusha Ramatoa Mchome fa ny tariby tariby, rehefa namboarina, dia hiasa amina tariby miisa 25 afaka mitondra mpandeha 150 rehefa mankany Shira Plateau, efa ho 3,000 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina.
Ny serivisy fitaterana tariby dia hatsangana sy ampiasain'ny orinasa amerikanina tsy miankina iray, izay nanoratra orinasa iray ao an-toerana, AVAN Kilimanjaro.
Nitaraina i Edson Mpemba, talen'ny fiarahamonin'ny mpiambina, fa raha voaorina, “ny ankamaroan'ny mpizahatany dia hisafidy fiaran-tariby hampihenana ny vidiny sy ny halavan'ny fijanonana”, misy fiantraikany amin'ny fizahan-tany ankapobeny mifandraika amin'i Kilimanjaro.
Nanontany tena ihany koa izy hoe maninona ireo mpanapa-kevitra no tsy mijery ny tombontsoan'ny mpiasa an-tapitrisany tapitrisa tsy mahay fa miankina amin'ny tendrombohitra fivelomana.
"Eritrereto ny fiatraikany amin'ny fianakavian'ireo mpiambina 250,000," hoy izy ary nampitandrina fa, "ny toeran'ny tariby tariby dia ho toy ny hevitra mendri-kaja sy manavao, saingy amin'ny fotoana maharitra, hanimba ny fiainana sy ny ho avin'ny ny ankamaroan'ny olona eo an-toerana izay miankina amin'ny tendrombohitra ny fivelomany. "
Ny sekretera mpanatanteraky ny Fikambanana Porters Tanzania, Loshiye Mollel, dia naneho ny tahotra sao hanjary tsy hanan-java-mahasambotra ireo mpiambina 250,000 XNUMX ny tetik'asa ary mety hanery azy ireo hiaina amin'ny asa ratsy.
Ny lehiben'ny mpiambina ny valan-javaboary miaraka amin'i KINAPA, Betty Looibok, kosa dia nilaza fa ny fananganana ny tariby tariby dia miankina amin'ny valin'ny fanombanana ny tontolo iainana sy ny fiatraikany ara-tsosialy ankehitriny.
"Ny fiara tariby dia natao ho an'ireo olona efa niatrika olana ara-batana, ankizy ary mpizahatany efa ela izay maniry hiaina fientanam-po amin'ny fiakarana an-tendrombohitra Kilimanjaro hatrany Shira Plateau nefa tsy maniry ny hahatratra ny tampon'ny tampon'isa," hoy ny fanazavany.
Raha minisitry ny harena voajanahary sy fizahantany i Dr Hamis Kigwangalla dia mino fa ny serivisy fitaterana tariby dia hitondra mpizahatany maro izay tsy nisafidy ny hiakatra an-tendrombohitra, Andriamatoa Mpemba kosa mahita fa very asa ho an'ireo mpiambina sy vola kely ho an'ny governemanta amin'ny vitsy an'isa. mijanona rehefa tonga ny mpizahatany, manandrata miakatra sy midina ny tendrombohitra, ary miala, mamono ny tena fototry ny fiakarana an-tendrombohitra ho toy ny traikefa fizahan-tany ary mandà ny fiveloman'ny mpitatitra.
Ny olona sasany dia manamafy fa ny tariby tariby any an'ala dia ampiasaina any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao toa an'i Suisse sy Etazonia. Saingy misy ny vidin'ny tontolo iainana amin'ny fananganana fiara tariby.
Voalohany, ny hazo sy ny zava-maniry dia tsy maintsy diovina mba hamoronana ny làlan'ny tariby izay misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana, toy izany koa ny fananganana pylons sy tilikambo ary onjampeo lehibe manimba ny flora, izay mila taona maro vao tafarina, raha sanatria.
Merwyn Nunes, mpiasam-panjakana teo aloha tao amin'ny Minisiteran'ny Harena voajanahary sy ny fizahan-tany ary ny filoha mpanorina ny Tanzania Association of Tour Operators (TATO), dia nilaza fa ny tetik'asa 58 (2) amin'ny lalàna tanzania fizahan-tany faha-2008 11 izay milaza fa fa ny fiakarana an-tendrombohitra na ny dia an-tongotra dia natao ho an'ireo orinasa tompon'ny tanzanianina tanteraka.
Mpitarika fizahan-tany efa za-draharaha, Victor Manyanga, dia mampitandrina fa ny serivisy fitaterana tariby dia hampiroborobo ny fizahan-tany faobe, mifanohitra amin'ny politikan'ny fizahan-tany ao Tanzania ary mandany ny ekolojian'ny Mount Kilimanjaro.
"Ny làlan'ny Machame izay hanamboarana ny tariby tariby dia ny làlan'ny mpifindra monina, ary ny tariby elektrika dia hanimba azy ireo tokoa," hoy izy.
Sam Diah, mpandraharaha mpizahatany iray hafa, dia manontany tena hoe maninona i Tanapa no nanome an'ity tetikasa ity ny orinasa vahiny nefa tsy nanara-dalàna.
Manahy ihany koa ireo mpandraharaha mpizahatany momba ny fiarovana ireo mpandeha amin'ny tariby miisa 150 raha sendra lozam-pifamoivoizana, satria helikoptera mpamonjy voina ihany no mitondra efatra maty isaky ny mandeha.